Gobolka Sahel - Equal Access International
Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Ku bood boodhadhka [n]
U gudub nuxurka [c]
U gudub dhanka lugta [f]
Cilmi baarista & Kheyraadka
Warbixinta Sannadlaha ah
Wadajir nala shaqee
EAI waxay ka fulineysay mashruucyo caalami ah oo horumarineed oo ballaaran oo ka socda Afrika Sahel tan iyo 2008. Shaqadeena waxay ka bilowdeen Niger iyo Chad, sanad walbana waxaan qiimeyneynaa gaarista aan gaarno oo aan hogaamineyno dalal badan oo isku dhaf ah, barnaamijyo saameyn badan leh sanado badan. Maanta, waxaan haysannaa xafiisyo dalka ah oo ay ku shaqeeyaan shaqaale aad u fiican oo maxalli ah oo kala ah Cameroon, Mali, Niger, Burkina Faso, iyo Chad. EAI waa hormuud ka ah dhisidda nabadda iyo ka hortagga xagjirnimada rabshadaha wata ee guud ahaan gobolka. Barnaamijyadeenu waxay carqaladeeyaan hoggaamiyeyaasha bulshada ee soo ifbaxa, waxay dhisaan buundooyin u dhexeeya daneeyayaasha kaladuwan waxayna u isticmaalaan warbaahinta iyo teknolojiyadda si loogu gudbiyo xalal waara. Waxaan ku hogaamineynaa mashaariicda sinnaanta lamaanaha, ka qeybgalka bulshada, adkeysiga bulshada, waxaana adeegsanaa warbaahinta cusub iyo teknolojiyada cusub. Waxaan qorsheyneynaa inaan sii wadno fidinta guud ahaan gobolka iyo qaaradda annaga oo kaashanayna ururrada maxalliga ah iyo deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah.
Taageeridda hoggaamiyeyaasha bulshada iyadoo la dhisayo farsamooyinka teknolojiyada iyo u doodista iyo kor u qaadista codad dhexdhexaad ah iyada oo loo marayo barnaamijyada warbaahinta ee saameynta weyn leh ee Mali, Chad, Burkina Faso, Niger, iyo Cameroon. 2016-xaadir
Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Sahel
Codadka Nabadda (V4P)
Mashruucan wuxuu soosaaraa kuna faafiyaa raadiyaha hal-abuurka leh, TV-ga, iyo barnaamijyada warbaahinta bulshada si loo xoojiyo sheekooyinka maxaliga ah ee yaraanaya u nuglaanta u nuglaanta xagjirnimada rabshadaha ah ee Waqooyiga Nigeria iyo Lake Lake Basin. 2016-xaadir
Nigeria, Sahel, Wasaaradda Arimaha Dibadda Mareykanka
Qoolleyda Cad (Farar Tattabara) Xarunta Fariinta ee Waqooyiga Nigeria & Lake Basin Lake
Barnaamijka PDev, bilow ilaa dhamaad, wuxuu isku xirey dadka wuxuuna awood u siiyay inay dhisaan shabakad iyaga u gaar ah oo nabadeed.
Burkina Faso, Chad, Niger, Sahel
Nabadda iyada oo loo marayo horumarka II (PDevII)
Isgaarsiintu waa aalad muhiim u ah wax ka qabashada darawalada xag-jirnimada rabshadaha wata (VE). EAI waxay soo gudbisay howlo badan oo isgaarsiineed oo loogu talagalay in lagu kobciyo xasilloonida, adkeysiga, nabadda, iyo barwaaqada Niger iyo Chad intii u dhaxeysay 2009-2011.
Burkina Faso, Niger, Sahel
Nabadda iyada oo loo marayo horumarka I (PDevI)
Isagoo ku dadaalaya sidii loo gaari lahaa adkeysiga bulshada, isku filnaashaha, isla xisaabtanka, iyo caafimaadka bulshada iyadoo la xoojinayo jaaliyadaha iyada oo loo marayo awood baahsan iyo ilaha go'ay iyadoo la kordhinayo socodka macluumaadka bulshada.
Horumarinta warbaahinta ee dimoqraadiyada Niger
Sidee haweeney reer Niger ah ay gacan uga geysaneysaa dhisida nabada xaafadeeda
Tani waa sheeko kusaabsan Ni Ima. Ni Ima waxay ku nooshahay xaafad ku taal Niamey, oo ah magaalo madaxda Niger ...
Maqaalka fikirka leh, qorayaashu waxay kuxirayaan istiraatiijiyad guud iyo kaqeybgal iyo ficillo taageeraya dhisidda awoodda hay'ad.
Nepal, Kaqeybqaadashada Warbaahinta & Teknolojiyada, Cilmi baaris & Barasho
Qaab guud, qaab waxbarashadda xudunta u ah dhisida awooda qiimaynta ee ururada horumarinta
Kheyraadkan qiimaha badan ee loogu talagalay isgaarsiinta ee xirfadleyda horumarinta ayaa ujeeddadeedu tahay in la dhiirrigeliyo wada-hadallo ku saabsan waxa ay ula jeedaan in la xoojiyo isgaadhsiinta ficil isla markaana la dhiirrigeliyo isbeddel bulsho oo togan.
Afghanistan, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Wadamadii hore, Filibiin, Sahel, Yemen, Dhisidda Nabadda & Isbedelka Xag-jirnimada, Horyaalnimada Sinnaanta Jinsiga & Awoodsiinta Haweenka, Maamulka & Wada Shaqaynta Madaniga ah, Kaqeybqaadashada Warbaahinta & Teknolojiyada, Cilmi baaris & Barasho
Faa'iidooyinka iyo xaddidaadda “Qaabka Soojiidashada leh” oo loogu talagalay wada xiriirka horumarka (C4D)
Eeg Dhammaan Cilmi-baarista & Kheyraadka
Reedyow (re) firfircoon: soo celinta nabadda inta lagu jiray iyo ka dib afgambigii Burkina Faso
Intii lagu jiray kacdoonkii 2014 ee Burkina Faso, Ibrahim Touré wuxuu abaabulay 15 xubnood oo ka mid ah koox dhageysiyayaashiisa EAI si ay u difaacaan abaabulka una soo celiyaan nabadda. Tani waa sheekadiisa.
Ka taageer EAI sidii loo naaqusi lahaa saameynta aan ku leennahay guud ahaan Sahel iyada oo loo marayo tikniyoolajiyadda horumarka, hoggaaminta madaniga ah iyo sinnaanta dheddig-laboodka
Xuquuqda daabacaadda Xuquuqda 2021
Is qor Isugeynta si loo sii xirnaado
Bixi banaantan mid madhan haddii aad tahay aadane: